xamuul xamuul | RayHaber | raillynews
Homegaadiidka xamuulka hawada
gaadiidka xamuulka hawada
Shirkadaha doorbidaya Yenisehir Air Cargo Coms Profitable
Muhsin Koçaslan, oo ah xubin ka tirsan guddiga BTSO ayaa sheegay in shirkadaha fadhigiisu yahay magaalada Bursa ee u adeegsanaya garoonka diyaaradaha Yenişehir howlaha xamuulku ay yeelan doonaan faa iido hal maalin ah marka loo barbar dhigo shirkadaha fuliya macaamilkooda ganacsi Istanbul. [More ...]
Adeegga Dukumiintiga Koowaad ee laga soo dejiyo Madaarka Yenisehir
Maddaarka Yeni Yehir Airport wuxuu bilaabay inuu bixiyo adeegyo xamuul oo xamuul hawada ah marka loo eego BTSO Lojistik AŞ, oo ay dhistay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa. Guddoomiyaha BCCI Ibrahim Burkay, Turkey ayaa saldhig wax soo saarka ee Bursa, [More ...]
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa waxay keenaysaa laba mashruuc oo dheeri ah dhaqaalaha magaalada. Ibrahim Burkay, Gudoomiyaha Golaha Agaasimayaasha ee BTSO, wuxuu qabtaa shaqooyinka BTSO Lojistik AŞ, oo ay ugu talagaleen inay yareeyaan qiimaha saadka ee ganacsiga adduunka Bursa. [More ...]
Garoonka Istanbul iyadoo furitaanka oo ka mid ah "Aeronautical Center" ee gaadiidka xamuulka hawada Turkey ayaa kor u qaadi doonta saamiga suuqa ka booska ka mid ah ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha State Management General Manager Funda ee January, logistics dunida ee garoonka diyaaradaha ee ugu weyn [More ...]
Elder, 3 ardayda. Saameyn ku yeelanaya Madaarka iyo Maareynta Xeynaha
Ururka Caalamiga ah ee Adeegga Logistics Gaadiidka iyo Bixiyeyaasha UTIKAD, dhaqanka logistics hagaagay ee Turkey sii wadaan in ay shaqo dhinaca goolka. Qaab dhismeedka hadafka, UTİKAD waxay isku dayeysaa inay la timaado ardayda hela tababbarka loojistikada fursad kasta. [More ...]
Tababarka Suuq-geynta BTSO wuxuu iftiin u yahay mustaqbalka qaybta
BCCI Logistics inuu sitaa Workshop on mustaqbalka of Light Industry: koritaanka Turkey ee Bursa iyo mashruucyada qiimaha-daray la Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BCCI), waxa uu qaaday saxiixyada urur muhiim ah oo dheeraad ah oo loogu talogalay qaybta saadka. dadweynaha [More ...]
BTSO waxay sii wadataa inay ka shaqeyso Gulista xamuul xamuul: Xubnaha Golaha Saadka ee ka howl gala Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa waxay baaraan xarumaha howlgalka xamuul ee garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen. Maareynta BTSO [More ...]
Socdaalka xamuulka xamuulka hawada adduunka ee Bursa: Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha Bursa (BTSO) Golaha Saadka, Gegada diyaaradaha Yenisehir 'xamuul hawada' ayaa sii wada shaqada furitaanka. Wakiilada qaybta saadka, adeegga Altıparmak [More ...]
E-AWB ee Xawaaraha iyo Hufnaanta Hawada
E-AWB ee xawaaraha iyo ku-habboonaanta Hawada: Kulan macluumaad ah oo ku saabsan 'hirgelinta E-AWB' oo ay martigelisay shirkadda Cargo ee Turkiga iyo Ururka Soo-saareyaasha Adeegga ee Adeegga iyo Adeegga Caalamiga ah (UTİKAD) iyo IATA bisha Febraayo 16 [More ...]